Filim: Xarunta daryeelka dhalinta - Youmo
Filim: Xarunta daryeelka dhalinta
Filmer: Ungdomsmottagning - somaliska
Maryam xanuun badan oo dhiiga cadada ah baa haya. Alex ma dareemayso in ay gabadh tahay, balse wiil oo kale. Emil ayaan sida xun ee uu dareemaayo aan waligii cidna kala hadal. Simon waxa uu ka cabsi qabaa in guskiisa uu kici waayo. Amanda waxay ka warwarsan tahay in ay uur leedahay. Aliyah iyo Reza waxay ka baqayaan inay qoyska Reza ka soo hor jeedsan doonaan xiriirkooda.
Dulmar guud - Filim: Xarunta daryeelka dhalinta
Kubada-cagta, dhiiga-cadada & galmada
Filim: Waxaan aaminsanahay in aan wiil ahay
Alex ma dareemayso in ay gabadh tahay, balse wiil oo kale.